Diyaarado dagaal oo uu leeyhaya Khalifa Xaftar, ayaa duqeeyay cisbitaalo ku yaala tripoli dilayna dhakhaatiir | Biyoguurenews.com
Home Wararka Diyaarado dagaal oo uu leeyhaya Khalifa Xaftar, ayaa duqeeyay cisbitaalo ku yaala...
Diyaarado dagaal oo uu leeyhaya Khalifa Xaftar, ayaa duqeeyay cisbitaalo ku yaala tripoli dilayna dhakhaatiir
Duqayn dhanka cirka ah ayaa lagu dilay shan dhakhtar oo ka hawl galayey cisbitaal ku yaal caasimadda Libya ee Tripoli, sida ay sheegeen masuuliyiinta xukuumadda dalkaas ee Qaramada Midoobay ay taageerto.
Diyaarado dagaal oo uu leeyhaya Khalifa Xaftar, oo ah general fallaago ah oo hoggaamiya ciidamada la baxay Ciidamadii Qaranka Libya, ayaa qaaday weerarka, sida uu sheegay afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka dalkaas.
Wali wax war ah kama soo bixin Ciidamada Qaranka Libya ee General Xaftar.
Khilaaf ayaa hareeyay dalka Libya tan iyo markii sannadkii 2011 xukunka laga tuuray hoggaamiyihii waqtiga dheeraa ee Muammar Gaddafi.
Dagaalka u dhexeeya xukuumadda ay Qaramada Midoobay taageerto ee uu hoggaamiyo Ra’iisal Wasaare Fayez al-Sarraj, iyo ciidamada Qaranka Libya oo uu hoggaamiyo Khalifa Xaftar, ayaa galaaftay nolosha 1,100 oo qof tan iyo bishii April, sida ay sheegtay Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO.
Dagaalkan oo la isku mari waayey ayaa ka socda hareeraha magaalada caasimadda ah, halkaas oo labada dhinacba ay duqaymo isu adeegsanayaan, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee AFP.
Duqaymo dhacay Sabtidii ayaa lagu dhaawacay toddobo qof, oo ay ku jiraan qaar ka mid ah dadka wax soo samata bixiya, sida uu sheegay Afhayeenka wasaaradda caafimaadka Lamine al-Hashem.
“Waxa uu ahaa weerar toos ah oo lala beegsaday cisbitaalka oo ay maamulaan kooxo caafimaad,” ayuu yidhi Mr Hashemi.
Weerarkan ayaa ah kii saddexaad oo lala beegsado cisbitaalkan, sida ay sheegtay AFP.
Colaadda ayaa sidoo kale halkaas ku qabsatay muhaajiriinta Afrikaanka ah ee Sii mara Libya inta ay u sii socdaan Yurub.
Xukuumadda Libya ayaa ciidamada general Xaftar ku eedaysay duqaymo dhanka cirka ah oo bishii hore lagu qaaday xarumo dadka lagu hayo oo lagu dilay ugu yaraan 50 qof oo muhaajiriin ah.
Si kastaba ha ahaatee, ciidamada general Xaftar ayaa sheegay in ay weerarkaas ku qaadeen ciidamo dawladda taabacsan oo deggenaa meel xaruntaas u dhow kuwaas oo duqaymo ku jawaabay isla markaasna waxyeelleeyey xarunta muhaajiriinta.
Madaxa guddiga xuquuqda aadanaha u qaabilsan Qaramada Midoobay, Michelle Bachelet, ayaa sheegtay in weerarkaas uu ka mid noqon karo dambiyada dagaalka.
Yaa maamula Libya?
Maleeshiyaadka kala duwan ee ka dagaallama Libya ayaa dhab ahaantii hoggaanka u haya talada dalka Libya – kuwaas oo ay kala taageeraan labo awoodood oo siyaasadeed oo kala ah Bariga iyo Galbeedka.
Xukuumadda dalkaas ka dhisan ayaa waxaa hoggaamiya Ra’iisal Wasaare Fayez Sarraj, oo ah nin Injineer ah xirfad ahaan.
Bishii March ee sannadkii 2016-kii ayuu tagay magaalada Tripoli, afar bilood ka dib markii la gaaray heshiis ay garwadeen ka ahayd Qaramada Midoobay, si uu halkaas maamulkiisa uga hirgaliyo.
Saddexdii sano ee la soo dhaafay wuxuu ka shaqeeyey sidii uu taageero uga heli lahaa maleeshiyaad iyo siyaasiyiin kala duwan, balse awood badan kuma lahan talada dalkaas.
Markii qolyihii gacanta ku hayey magaalada Tripoli ay diideen in ay isdhiibaan sannadkii 2014-kii, Ra’iisal wasaaraha oo markaas la soo doortay wuxuu u guuray magaalada dekedda leh ee Tobruk, oo 1,000km u jirta caasimadda.
Previous articleKoonfur Waa Inay Calankeeda Shuruud La,aan Ku Gaysaa Waqooyi Si Midnimo Loo Helo”..Madaxweyne Lafta Gareen
Next articleWaraysi Lala Yeeshay Wakiilka Somaliland Ujooga Kenya Iyo Jawaabaha Uu Ka Bixiyay Su,aalo Ay Dadwaynuhu Waydiiyeen!